Iko kune bug inokanganisa iyo iPhone 7 kana uchiisa iyo ndege ndege mode | Ndinobva mac
Yakafananidzwa | | iPhone
Nhasi chaiye ndanga ndichitaura kuti paive nekukona kutadza mune nyowani iPhone 7 uye 7 plus. Ini ndanga ndichireva izvo zviri kutaurwa kuti beep inonzwika mukati mayo pane dzimwe nguva, asi izvi zvakasiyana. Iye zvino vashandisi vataura chimwe chinhu chine chekuita neyendege maitiro eIOS 10, asi chete pane iyo iPhone 7.
Iwe unoda kuziva here kuti chii kana chakanganisa mudziyo wako kana wakamboona chimwe chakafanana? Ramba uchiverenga nhau.
IPhone 7 uye modhi yendege haikwane
Sezvo imi mese muchiziva, ndege yendege haingobatsire chete kana iwe uchiita nzendo refu pakati pemakore nemhepo inopisa mabharuni. Iyi nzira inokutendera kuti udzivise kutaurirana uye network kubatana pane yedu kifaa. Wi-Fi, data uye kufukidza, Bluetooth, uye nezvese zvinhu zvese zvakaremara. Unogona kushandisa Wi-Fi panguva imwe chete yaunoisa, asi musimboti inoshanda kuremadza zvese.
Vamwe vashandisi, kusanganisira ini, shandisa iyi modhi kubhadharisa nharembozha nekukurumidza, kuchengetedza bhatiri kana kungodzivirira kusadaidzwa uye kusafanirwa kudzima iyo iPhone. Dambudziko nderekuti kana tikazvimisa, kubatana kwese uye kufukidza zvinodzoka, asi kwete mune mamwe maApple 7 ne7 nemhando. Zvinoreva kuti mushure mekubvisa modhi yendege ivo vakagurwa uye kufukidza hakuna kudzoka.
Izvi zvataurwa nevashandisi uye ivo vatove kuvhurwa neApple kuti vazvigadzirise. Aya marudzi ekukundikana akajairwa uye akafukidzwa newarandi. Kana izvi zvikaitika kwauri, usazeze kufonera technical technical service kana kuendesa kuApple Store.
Tichaona mumazuva anotevera kana mamwe matambudziko akaita seaya abuda kana kwete, uye chii chinoitika pakupedzisira neSamsung, mambokadzi wekukundikana, uye ini ndinoti ndiye mambokadzi nekuti akavezwa korona nekuputika. Ari kudzorera Cherechedzo 7 kuzvitoro munguva pfupi iri kutevera kuti itengezve. Rombo rakanaka kumakambani ese ari maviri uye dai makwikwi achienderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iPhone » Iko kune bug inokanganisa iyo iPhone 7 kana uchiisa iyo ndege ndege
Izvo zvinonzi iyo iPhone 7 uye 7 plus inoburitsa inoenderera yemukati beep